Ukutya izinja ngokwenza umatshini eyona nto intle,ukuvelisa iipellets zezinja
Amandla:15KW + 0.4KW + 0.4KW izigaba ezizodwa
Umthamo:120~ I-150kg / h
Ubungakanani bokugqibela beepellets:0.9-15mm
Isetyenziselwe: ukwenza ukutya kwenja,Ukutya kwekati,ukutya kwesilwanyana,ukutya kweentlanzi
Ubume bokugqibela beepellets:ubume bebhola,ubume bethambo,imilo yentliziyo,ubume beenyawo
Iimpahla ezingekasilwa:uflawa wombona, isidlo seentlanzi, ithambo lokutya, isidlo senyama, umgubo weembotyi zesoya,iiamino acid njl
Izinto zokufuma ezishushu kufuneka:20-25%
Umatshini wokwenza izinja ukutya ngumatshini osele wenziwe ukuphucula intengiso yokutya kwenja, ephuhliswe ngempumelelo kunye namava eminyaka yethu yophando kumatshini wokutya. Lo matshini wokutya izinja ugcina ukutya kwezilwanyana zasekhaya ngemilo yenoveli, incasa ekhethekileyo kunye nombala. umatshini wokutya izinja unokuhlangana nezinye iimfuno zentengiso yanamhlanje ngeendlela ezininzi eziphezulu, ezinje ngesayensi yesondlo ifomula kunye nokwenziwa lula. Kwaye lo matshini wokutya owenza izinja unokwenza ukutya kwezilwanyana ezigciniweyo kuzaliswe, iya kuthandwa ngakumbi zizilwanyana zasekhaya zangoku.
Izinto eziluhlaza zomatshini wokutya owenza inja
Inja yokwenza umatshini wokutya isetyenziswa ngokubanzi kwiifuffe grains kukutya okuphezulu kwezilwanyana zasekhaya,njengokutya kwenja,Ukutya kwekati, iipellets zokutya emanzini, intlanzi yekati, iimbadada, unonkala,inkukhu,yehagu,ibhokhwe,njl.
Umatshini wokuvelisa ukutya kwenja unokuqhubela umgubo wombona, isidlo seentlanzi, ithambo lokutya, isidlo senyama, isosi yesoya,ii-amino acid ukuya kwiipellets.
Inzuzo yomatshini wokutya owenza inja
1.Ipharamitha yetekhnoloji, njengezinto eziluhlaza, iqondo lobushushu, kwaye umswakama wale nja wokutya wenza umatshini uyahlengahlengiswa. ukutya kweenja ukutya okuveliswa ngulo matshini wenzala kunembonakalo entle, incasa ekhethekileyo kunye nerayisi-yesondlo, zilungele izilwanyana ezahlukeneyo kunye neentlanzi.
2.Umatshini wokuvelisa ukutya wenja usetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokutya kwezilwanyana, njengezinja, amakati, intlanzi, iimpungutye, iintaka kunye nezinye izilwanyana zasekhaya.
3.Yonke imveliso yokutya yenja isebenza ngokuzinzileyo kunye netekhnoloji ephezulu. Inokwanelisa iimfuno zemveliso yabathengi abohlukeneyo kwimarike yangoku.
4.VICTOR inja yokutyisa inja yamkele ubuchule bokukhulisa ubuchule. ingasetyenziswa kwimveliso yokutya yenja ,Ukusuka kwizinto eziluhlaza zokutyhoboza ufakelo lweemveliso ezigqityiweyo, mayigqitywe ngexesha elinye.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokutya owenza inja
(kw) Ukusika amandla
(kw) Ukondla amandla
I-VTAS75 200-250 18.5 0.75 0.55 760
Ividiyo yomatshini owenza ukutya ukutya